Ahoana ny RS mety sy tsy mety raha mpivavaka
Date: 20 août 2017 - 12:00
Re: Ahoana ny RS mety sy tsy mety raha mpivavaka
Par: Valiny tsotra
Date: 20 août 2017 - 12:23
Ny RS @ tsy vadinao voalohany indrindra, ny tsy fanajana izay Mba faniriany sy ny dignité ny, ny viol sns......
Date: 20 août 2017 - 16:50
ilay fanontaniana nge dia ny hoe raha mpivady mifankatia tsara tsisy mampirafy dia inona no azo atao sy ny tsy azo ataon'ny mpivavaka @ resaka RS
Date: 20 août 2017 - 19:37
Matoa tsy nosoratana mazava tahaka an'ireny boky guide d'utilisateur ana-appareil ireny tao @ baiboly mikasika an'izany dia tsy mitovy arakaraky ny tsirairay ny mety sy tsy mety hoan'ny couple tsirairay.
Tsy mitondra vokatsoa ny hanimbana ny saina aman'eritreritra @izany, manjary hanenjika ny eritreritry ny tsirairay @ze izany, efa ampy hisaintsainan'ny tsirairay @zay mety sy tsy mety aminy avy izay voasoratra.
Fa na hiteny aza ny hafa, tsy izay no mendrika hoanao, fa anjaranao no mamantatra izay mety aminao.
Date: 20 août 2017 - 19:47
Raha ny fahalalako manokana aloha dia mety ny rs amin'ny fomba firaisan'ny be sy ny maro (modele universel ) ;fa tsy mety kosa raha mivoana amin'io toy ny hita rehetra amin'ny film x ireny ,ho an'ny mpivavaka no resahina an .
Date: 20 août 2017 - 20:18
Ilay cunnilingus izao no manahirana ny saina hoe azo atao sa tsia?
Date: 21 août 2017 - 09:03
Ny fitiavana no lehibe indrindra. Andriamanitra tsy vetaveta otranao ka itsikilo ze ataonareo mivady.
refa ampitiavana, misy fifanekena iraisana fa tsi misy antery de ataovi ze ataonareo....
De hajao ni lalàna velona @ toerana misyu anareo de zai....
fa ra lani andro amadibadika baiboli eo nareo de ita mihintsy oe MAPALAELO...
Date: 21 août 2017 - 10:19
Izay mifanitsy ihany no tokony hikambana, izany hoe ny vavan'ny lah sy ny vavan'ny vav, ny penis s n vag1. izay tsy mifanitsy dia tsy tokony forcena ampifanitsiana
Par: ny blem
Date: 21 août 2017 - 11:37
ny blem te hahita plaisir max daholo nefa samy tsisy mahay hoe inona no ahazona an'zany dia ny imagination no madeha be. Dia rehefa vita anefa ilay izy dia mody hatsaraina eo hoe milay nefa tsisy tsirony izay manahoana akory.
Par: pretty girls
Date: 21 août 2017 - 12:47
rehefa iteraka ihany vao tokony hanao RS
Date: 22 août 2017 - 06:51
Dia aona izany raha lava sy fohy ilay mpivady?
Na raha te hikitika kely an'i balita ny tanan'i Madama dia tsy mety?
Date: 22 août 2017 - 08:05
Mandé ny mandé eh!, vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Date: 23 août 2017 - 11:59
ny tanana matoa nataon'Atra ho lava s afaka mietsiketsika dia afaka mikitika ny vatanao sy ny vatan'ny vadinao hatrany an-tampin-doha ka hatrany ampaladia
Date: 24 août 2017 - 10:29
atao RS évangelique zany ko !!
Date: 25 août 2017 - 08:44
Ny RS mety dia RS ialohavan'ny fotoam-pivavahana
Date: 26 août 2017 - 08:33
« …aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha Mbola tsy fotoanany.#
Ilay fitiavana manakaiky ny Agape io, ilay tonga lafatra miaraka daholo ny Fanahy, nofo,ny mahaolona rehetra.Ny zava-dehetra azontsika atao avokoa, fa tsy ny zava-drehetra no mahasoa!
Raha tena tianao tanteraka ny vadinao dia fantatrao izay mahasambatra azy, fa tsy resaka course au plaisir ny vatanao no enjehina
Date: 26 août 2017 - 10:56
Valiny tsotra>> Dia raha course ua plaisirn'ny vatanay mivady dia inona no olana @zany????
Efa hoe mpivady no resaka ko mbola avahanao ihany zareo. Misy foza ngamba ny ao an-tsainao
Date: 27 août 2017 - 05:46
Dia raha> resaka sexualite ny mpivavaka ny resaka eto, dia MBA vakio Tsara aloha vao mamaly sy manopa, course au plaisir ny vadinao mialoha ny anao no tiako lazaina fa tsy enao manokana sans penser d'abord à l'autre.
Efa formaté @ resaka scenes pornographiques sns ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa mety sy tsara daholo izay hitany sy malaza na sado maso io na pratiques sexuelles hitany izao fa dégradantes aza..
Tadidio fa tsy objets sexuels ny vatanareo fa misy fanahy sy saina ihany koa
Date: 27 août 2017 - 07:40
Tsotra be ilay izy fa tsy mila asarotina na rohitina lavabe. Raha mivavaka ianao, ireto sasany ireto tokony tsy ho ataonao, na handalo ny sainao akory :
- Double pénétrations
- Rs à trois ou plus
- Rs avec les bêtes
Ka zay no tsotra sy marina. Ohatra mazava kosa, raha mandray ny Tompo ianao, tsy iny vavanao hafahafa iny akory no handraisanao azy intsony. Nisy nilaza tao hoe, ka efa nos asaina koa. Nosasaina ahoana eh ? Ilay izy anie sady naloto aussi bien au sens propre qu'au sens figuré eh !
Date: 27 août 2017 - 10:56
Maty izany isika ko,antsangano ny tananan ´izay Tsy nanao fellation ?
Aza mba Manpihomehy hoa.
Date: 27 août 2017 - 11:13
"Efa, renareo fa voalaza hoe: Aza mijangajanga (Eks. 20. 14). Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala iny, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin'ny helo."
Iza no olombelona teto an-tany tsy nijery vehivavy mihitsy hila na ko hoe te hiRS aminy nandritra ny androm-piainany rehetra. Ny tina ambara eto dia hoe aza be zesta, aza mianak'hendry, ary aza miseho milay, aza mitady fanamarinan-tena fa manetre tena.
1 Korintiana 16:14
Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana.
DIA ito ny manampy atsika
Fa izay miahanahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany; fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana.
Date: 27 août 2017 - 15:30
Rehefa tsy entin'ny filan-dratsin'ny fo amin'ny fahalotoana, ka zavatra degradant mifanala baràka amin'ny tena avy no atao dia izay fotsiny e.
Avy ao @ FO no miainga ny rehetra,na filan-dratsy na fankahalana na fitiavana sns..ka raha vao mibirioka @ izay dia tsy ho afa-po mihitsy, lasa mivaona @ zavatra hafa
Raha olona mivavaka dia mahalala fa Isika olombelona dia mihoatra nohon’ny biby no nanamboaran’Andriamanitra antsika, ary ny devoly no nampiditra fisainan-dratsy tao anatintsika.
Lasa manadino ilay teny hoe raha misy manimba ny tempolin’ Andriamanitra, dia mba hosimban’ Andriamanitra kosa izy; fa masina ny tempolin’ Andriamanitra, dia hianareo izany »
Raha efa nataonao daholo ny resaka actes pornographiques rehetra hatrizay dia ny ava-dehibe dia fiovana, fanomezana Hasina ny vatan'ny vadinao fa tsy fanetrena azy intsony atao.
Date: 27 août 2017 - 16:49
ka eo indrindra isika ary :
ny varavarana idirana ao amin'io Tempolin'Andriamanitra io, izany hoe, Tranony, fidirany, ampiasanao zavatra tsy mifanaraka Aminy, tsy mendrika azy (inonoanao ny fivoahana maloto mihosina...) soyons francs....
dia mendrika azy ve izany ? io vava io izany andraisanao azy ho ao amin'ny Tempoliny.
Sa... diso ny raisonnement-ko ? Ka mifidy izany tsika e : na mivavaka, na tsia. Ifonako ny vitako Tompo ô !
Date: 27 août 2017 - 23:40
Tena mba accros mihintsy ianareo an ,na Aty @ resaka sexualité aza dia ampidirina ny resaka fivavahana.
Date: 28 août 2017 - 00:10
Drog>> fa avy aiza ny sexualité aminao?? Ny don de la sexualité
Date: 28 août 2017 - 10:23
Raha ny fahalalako manokana aloha dia rehefa fahavetavetana dia tkn ho alavirina raha tena mitondra ny tenanao hoe tempolin'Andriamanitra ianao e.
Izany hoe raha ny tokony ho izy ,araka ny voalazan'ny namana iray etsy ambony dia ireto avy raha ny fantatro:
-Fellation =>satria tsy ny iny vavanao avy ninono zavatra tary iny no andeha hideranao an'Atra,hivavahanao,hiantsonao ny anarany,Masina loatra mantsy izao Atra izao,ka izay te ho Azy dia tkn ho masina koa.
-Sodomie:izay efa tena raran'ny Baiboly,na mpivady aza,indrindra moa ny fiarahan'ny mitovy sexe.
Zay fa ny ankoatrzay efa tsy tkn atao daholo(fiarahana amin'ny olona tsy vadinao,fitsiriritana vhv hafa na lhl hafa hanao aminao,fijangajangana,sy ireny zavatra extra rehetra hita amn film reny e...,!)
Date: 28 août 2017 - 12:01
Dia ny kristianina koa ve izany tsy mahazo manao adin-drazana malagasy ? hahaha
Kivy aho mamaky an'reto kristianina ireto
Misy @#$%& falehako taloha eo Tsaralalana eo apitan'ny Conforama eo falehan'ilay pasitera FJKM any @ partie-Itaosy iny
Tena tianio pasitera io hono ny 69
izaho vao tsapako hoe maninona lery no mangalatra manao anzany kay bedy raha ny vadiny no ataony anzany.
Eny e, tohizo fa mety be ny anareo
Date: 28 août 2017 - 12:31
Ohatran'ny logique tokoa ireo voalaza fa tsy tokony atao ireo raha mpivavaka. Raha mpandray ianao indrindra indrindra. Nieritreritra aho, toa tena tsy azo atao ry reto, na dia indray mandeha aza ireo voarara ireo a !
Izaho manokana tena manaiky hoe : ""iny vavanao nanao acte hafahafa iny ve no handraisana an'Andriamanitra""
Ohatrahoatran'izay no filazan'ireo sasany eo ambony eo.
Marina koa ilay hoe misafidy ianao, na Rs hafahafa na mpivavaka.
Fa tsy hoe andeha hanaovana discussion be na conférence fa dia anao samirery io. Samy mitondra ny conscience-ny ! Tsisy idiran'olona hafa na iray aza, fa dia anjaranao sy Andriamanitra irery izay conscience izay.
Date: 28 août 2017 - 13:25
Tena marina ry reto fa menatra aho fa tsy vazivazy !
Mpandray aho, dia mahita an'izao resaka izao.... dia manenjika tokoa ny eritreritra fa tsy lainga.
Date: 28 août 2017 - 23:34
Sahirana a zareo a.
inn no atao ?
Date: 29 août 2017 - 15:10
Tapaka ny tsinaiko mamaky ilay hoe Ataovy ao ze ataonareo fa Andriamanitra nga hitsikilo ze ataonareo ao !!!!
Za mba manana fanamarihana maromaro vitsivitsy:
- ny kristianina dia mino fa adama sy eva no razambean'ny olombelona rehetra. Avy amin'ny adama sy eva zany dia nifanambady ny zanany, ny zafiny, ny zanaky ny zanany, sns ... en gros inceste zany no niandohantsika ... sahala amin'ny biby hafa hatramin'izao izay mbola mifanambady ny mpiray tampo... dia nefa avy tsika mamorona lalàna ny concept hoe ratsy ny mpiray tampo na ny mpihavana mivady.
- ny zavatra rehetra mahakasika ny vatanao dia Andriamanitra daholo no nanao azy: ny vava, ny tanana, ny tongotra sns ... Misy lalàna napetrak'Andriamanitra mikasika ny fifandraisan'ny olona samy olona sy ny fifandraisan'ny olona sy Izy Andriamanitra. Ohatra, samy ratsy daholo ny fahotana rehetra fa ny fijangajangana foana no anoharan'Andriamanitra ny fanompoana andriamani-tsy izy. Nolazain'Andriamanitra manokana ao anaty baiboly fa ny sodomita dia tsy mba handova ny fiainana mandrakizay, satria ny antony dia tsotra: lahy sy vavy no namoronany ny olona, ka ny an'ny lahy dia misy vadiny any amin'ny vavy. Ny olombelona anefa taty aorina no nahita nifampila ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy. Izany hoe tsy mifanaraka amin'ny conception namoronana azy no nampiasan'ny olona ny zavatra nomena azy taty aoriana, hany ka nolazain'Andriamanitra directe fa tsy handova ny fanjakan'ny lanitra izany manao izany. Ny sisa (amin'ny fijeriko) dia matoa tsy norarany dia tsy mahadiso, fa ny olombelona sy ny fiangonana avy eo no mamorona lalàna hoe mety izao sy tsy mety izatsy. Ary matetika dia lasa ny lalan'ny fiangonana sy ny lalàn'ny olombelona indray no ataontsika ambonin'ny didy sy ny lalan'Andriamanitra.
- fa maninona i Davida mpanjaka, i Solomona, i Abrahana, sns ... no nanambady betsaka araka ny tantara ao anaty baiboly, nefa tsy nolazaina fa nijangajanga zareo? Nahitra sitraka sy fitia betsaka teo anatrehan'Andriamanitra aza ireo olona ireo. Niova ve izany ny fijerin'Andriamanitra ka hoe taloha tsy fahotana ny nanambady betsaka ary ankehitriny dia fahotana indray? sa ny fiaraha-monina sy ny concept moral an'olombelona no nahatonga sy namaritra hoe izao no TSARA ary izao no RATSY?
Hamaranako azy, misy tenin'Andriamanitra izay hoe milaza hoe "Aza marina loatra" sy ny hoe "Ny fihevitro sy fihevitrareo ary ny lalaNAREO tsy mba lalako". Tsy hoe akory nifanaiky tany ny fiangonana fa tsy METY izao na METY izao dia izay tokoa no izy. Ny izy dia amin'ny maha-kristiana anao dia mibitsika aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe mety izao na tsy mety izao ataonao izao. Rehefa misy zavatra mampisalasala anao dia mivavahà ka anontanio Andriamanitra hoe mety ve izao ataoko izao sa tsia. Hamaly anao foana Izy ary mety amin'ny fomba tsy ampoizinao aza.